Ngwa: Dị ka aerospace, mmanụ ala, ụlọ ọrụ kemịkalụ, ike eletriki, nkà mmụta banyere mba, nchekwa mba, ụlọ ọrụ ọkụ na akwa na ụlọ ndị ọzọ dị n'èzí na-ebu ọkụ ọkụ nke akụkụ akụkụ ígwè siri ike, ma dabara adaba maka ụfọdụ ọrụ nchara nchara na ọkụ ọkụ. hydrocarbon Chemicals (dị ka mmanụ, mgbaze, wdg), dị ka petrochemical engineering, ụgbọala, mmanụ mkpọpu ala n'elu ikpo okwu, mmanụ nchekwa owuwu support etiti.
Adaba ewu: spraying, ala mkpuchi na brushing nwere ike ji mee ihe. Nkwado siri ike: ọ nwere nkwenye siri ike na ụdị epoxy, ụdị alkyd na ụdị phenolic antirust primer, nke siri ike ma sie ike, nke a na-ejikarị, yana oke mma na ọnụ ala. Cdgc-a ime ụlọ àjà ihe ọ -ụ -ụ dịpụrụ adịpụ dị nchara na-ekpuchi ọkụ ọkụ dabara adaba maka nchekwa ọkụ nke ndị otu na-ebu ibu dị iche iche na-arụ ọrụ nchara nchara karịrị 2 h.
Ngwaahịa a bụ ụdị oji dị omimi, enweghị ihe mgbaze (enweghị uto), nchedo gburugburu ebe obibi, enweghị mmerụ ahụ mmadụ, ọdịdị mcilage na-adịghị mma. A na-eji ya na nchekwa mba na mmanụ, ụlọ ọrụ Chemical, ụlọ ọrụ gas, ọdụ, ụlọ nkwakọba ihe egwu na ebe ndị ọzọ dị egwu, dị ka ihe ngosi tube ma ọ bụ ndị ọrụ ntanetị.
A na-eji ya maka mgbawa na-egosi iche na akara. Enwere ike iji ya kechie waya, nkwonkwo, eriri, paịpụ, waya ala, wdg iji gbochie ọkụ.
Mgbanwe organic ịkwụnye ihe nke intumescent fireproof sealant
A na-akpọ ụrọ ọkụ ọkụ ihe ọkụkụ na-ekpuchi ọkụ, nke enwere ike kee n'ime akpa na igbe. A na-ejikarị ihe ahụ eme ihe maka ịmịnye oghere nke wires na eriri iji gbochie ọkụ nke wires na eriri site na ịgbasa site na oghere gaa n'ọnụ ụlọ ndị dị n'akụkụ ma belata ọnwụ ọkụ. Ọ nwere ọrụ nke igbochi anwụrụ ọkụ, mgbochi ọkụ na igbochi ájá. Ya mere, a na-eji ihe nkwụnye ihe n'ọtụtụ ebe na ụlọ ọrụ ike, ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ụlọ ọrụ ndị na-egwupụta akụ, ụlọ ndị dị elu, ike ụgbọ mmiri, post na telekomunikashions, ọkpọ, metallurgy na injinia ndị ọzọ.
Inorganic fireproof ịkwụnye ihe onwunwe, a makwaara dị ka ngwa ngwa mwube fireproof ihe onwunwe.
A na-akpọkarị ya ngwa ngwa ntọala ngwa ngwa
Ngwaahịa a dabara maka mgbochi ọkụ nke ike na eriri nkwukọrịta, nke dị oke mkpa maka iwepu ihe egwu dị na nzuzo, na-eme ka arụmọrụ nkịtị nke nnyefe ọkụ na nkesa na usoro nkwukọrịta rụọ ọrụ. Ngwunye teepu na-ejide onwe ya nke ụlọ ọrụ anyị mepụtara bụ ụdị ngwaahịa ọkụ ọhụrụ maka ike na eriri nkwukọrịta. Ọ nwere uru nke ihe na-enye ọkụ na arụmọrụ ọkụ, nrapado onwe ya na operability. Ọ bụ nke na-adịghị egbu egbu, na-enweghị ntụpọ na enweghị mmetọ na ojiji, ọ naghị emetụta ikike dị ugbu a nke eriri na ọrụ nke eriri. Ebe ọ bụ na a na-eji teepu na-ejide onwe ya iji kechie n'elu eriri eriri, mgbe ọkụ dị, ọ nwere ike ịmepụta ngwa ngwa carbonized na-eguzogide oxygen na mkpuchi ọkụ, nke na-egbochi eriri ọkụ ọkụ.
Ogwe mkpuchi mkpuchi (ụdị: dc-a2-cd08)
dc-a2-cd08 system firealing sealing plate is a new type of fireproof material developed by our company, nke bụ ísì ụtọ, halogen-free, na ezi ihu igwe na-eguzogide, anwụrụ ọkụ tightness na ikuku tightness. A na-eji ya na ike nuklia, ike telekomunikashọn, metallurgy na ụlọ ọrụ petrochemical. N'ihi na ihe owuwu ahụ dị mfe, ya mere ọ nwere ike ịchekwa ọrụ mmadụ ma belata ọnụahịa. Ọ dabara adaba maka ngbanwegharị eriri USB Akụkụ ahụ dị mkpa.
Ihe mkpuchi oku nke ihe eji eme ihe maka ihe nchara bu ihe ohuru ohuru ohuru nke ulo oru anyi meputara dika uzo nke gb14907-2018. Mgbe ngwaahịa a na-ewe iwe, ụfụfụfụfụ n'ime ihe nkiri ahụ ga-emebi mgbe a kpụ ọkụ n'ọnụ iji mepụta mkpuchi mkpuchi na akwa mkpuchi na mkpuchi mkpuchi ikuku carbon. Ka ichebe ngwongwo nchara.
A na-akpọkwa ihe mgbochi ọkụ ọkụ Dc-a1-cd04 ọkụ ọkụ ma ọ bụ ọkụ na-anaghị ere ọkụ ọkụ. A na-eji osisi dị iche iche na-enweghị ike ịgbagha osisi a site na ntinye na ịpị sayensị. Ọ nwere ezigbo ire ọkụ na-agbapụta arụmọrụ, oge anaghị ere ọkụ karịa awa 3 ma ọ bụrụ na ọkụ, ike dị elu, enweghị mgbawa, mmiri na nguzogide mmanụ, nguzogide kemịkal siri ike, na-adịghị egbu egbu na njirimara ndị ọzọ. Na ule combustion nke dc-a1-cd04 mgbochi mgbochi ọkụ, ọkụ ọkụ kachasị mma bụ 1000 ℃ na-enweghị nrụrụ, akara niile na-ezute ihe achọrọ nke gb23864-2009, na arụmọrụ combustion ruru otu (enweghị ike) ọkọlọtọ akọwapụtara na GB / t2408 -2008. Dc-a1-cd04 ihe mgbochi ọkụ na-enweghị atụ na-emetụta ọkụ ọkụ na nkewa ọkụ nke eriri nke ọkwa volta dị iche iche mgbe ị na-etinye aka na nkwado ma ọ bụ akwa.Ọ na-eji ya na igwe na-arụ ọrụ nke ụlọ ọrụ ike, ụlọ ọrụ kemịkal, ígwè na nchara agbaze ụlọ ọrụ. , ogbunigwe na eriri kpụ ọkụ n'ọnụ ndị ọzọ dị na China.